YTP in News | Yatanarpon Teleport
HOME > CAREERS > YTP IN NEWS
Meet the YTPians
Yangon ICT Expo 2017 ပွဲတွင် ပေးခဲ့သော Promotion အား ဝါကျွတ်ကာလအတွင်း ဆက်လက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
➢ Promotion I >> Free Setup Fee - Pay3months advanced
၃လစာ ပေးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ကနဦးတပ်ဆင်ခ ပေးရန် မလိုတဲ့ ပရိုမိုးရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။
➢Promotion II >> Free Setup Fee and 15 days free subscription - Pay6months advanced
၆ လစာ ပေးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ကနဦးတပ်ဆင်ခ ပေးရန်မလိုဘဲ ၁၅ ရက်တိတိ အခမဲ့သုံးနိုင်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းမှသာလျှင် လစဉ်ကြေးအား တစ်လချင်းပေးဆောင်ရမှာပါ။
➢Promotion III>> Free Setup Fee and2months free subscription - Pay 10 months advanced
၁၀ လစာ ပေးသွင်းလိုက်တာနဲ့ ကနဦးတပ်ဆင်ခ ပေးရန်မလိုဘဲ ၂ လတိတိ အခမဲ့သုံးနိုင်ပါသည်။
လစဉ်ကြေးပေးဆောင်နိုင်မည့် အရောင်းရုံးခွဲများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများအသိပေးခြင်း
လစဉ်လတိုင်း၏ ၁၅ ရက်နေ့သည် လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုလျှက် ရှိသော အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု အတွက် လစဉ်ကြေးများ ပေးဆောင်ရမည့် သတ်မှတ်ကာလ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် မိမိတို့လွယ်ကူ၊ အဆင်ပြေမည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပေးဆောင် နိုင်ပါသည်။ ပေးဆောင်နိုင်မည့် ရတနာပုံတယ်လီပို့ အရောင်းရုံးခွဲများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများအား လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဘဏ်မှ တဆင့်ပေးသွင်းမည်ဆိုပါက “မြန်မာကျပ်ငွေ” ဖြင့် ပေးသွင်း လိုသူများ အတွက် မည်သည့် ကမ္ဘောဇ ဘဏ်ခွဲ တွင်မဆို ပေးသွင်းနိုင် ပါသည်။
KBZ - 060 1090 6004 133 801
UAB - 016 012 100 173 783
We trust that your experience of using your Yatanarpon internet Services has been enjoyable. We are pleased to provide you with more convenient options to pay your monthly services charges. You can either pay your bill at any of our sales outlets (I) or through the following banking channels (II). Please pay your bills on or before 15 of the Month to avoid disconnection and reconnection charges.
Payment Options II
KBZ A/C- 060 1090 6004 133 801 (USD)
UAB A/C- 016 012 100 173 783 (USD)
Please call us at our Customer Service Call Centre - +959964812301~03.
Now you can get in touch with us through Facebook https://www.facebook.com/ytpmm
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိခဲ့သော Winner ဆုရှင်များအား Yatanarpon Teleport Public Co.Ltd မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ် မြို့မ ကျောင်းလမ်းရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Miss Earth Myanmar 2017 Winner ဆုကို ခါးနံပါတ် (၁၁)အလှမယ် တင်စန္ဒာမျိုးက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။
Winner ဆုအပြင် အခြား Title ဆုများဖြစ်သည့်
Miss Myanmar Air ဆုကို ခါးနံပါတ် (၁၄) Suzan Shwine ၊
Miss Myanmar Water ဆုကို ခါးနံပါတ်(၇) Su Wut Yee ၊
Miss Myanmar Fire ဆုကို ခါးနံပါတ် (၆) Yin Yin Htet ၊
Miss Myanmar Eco-tourism ဆုကို ခါးနံပါတ် (၁၁) Hnin Wai Wai Nwe ၊
Miss Myanmar Teen ဆုကို ခါးနံပါတ် (၄) Yuki San
တို့မှ အသီးသီး ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြပါသည်။
Miss Earth Myanmar 2017 အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်း နှင့်
ဆုရရှိခဲ့သော Winner ဆုရှင်များကို Yatanarpon Teleport Co.Ltd မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
Photo - POSH Xpress
Miss Earth Myanmar 2017 Grand Final အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ
Yatanarpon Teleport Public Company Limited မှ Connectivity Partner အဖြစ် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ထားသော Miss Earth Myanmar 2017 Grand Final အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲကို ဇွန်လ ၂၄ ရက် စနေနေ့ ညနေ ၆ နာရီ၌ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Channel9TV Channel နှင့် Miss Earth Myanmar Official Page တို့ မှ Live ထုတ်လွှွင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
" မိုးရာသီအထူးလျှော့ဈေး" အစီအစဉ် စတင်ပါပြီ.. ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော Customer များနှင့် YTP ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ရတနာပုံတယ်လီပို့ ၏ Fiber အင်တာနက် လိုင်း အိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်မှု (FTTx) မိုးရာသီအထူးလျှော့ဈေး အစီအစဉ်စတင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
မိုးရာသီအထူး Promotion အတွက်- YTP သို့ အမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါလင့် များမှ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ် သိလိုသည်များကို မေးမြန်းလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။